Vaksinin'ny UK: Nahoana ianao?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Vaksinin'ny UK: Nahoana ianao?
by Mario Masciullo - Manokana ny eTN
Mpanoratra Mario Masciullo - Manokana ny eTN
Ny fampielezan-kevitry ny vaksiny any UK dia mety hitera-doza noho ny fahatarana fanaterana avy any India. Na eo aza ny jiro maitso avy amin'ny maso ivoho eran-tany eropeana ao AstraZeneca, nandrahona i Bruxelles: “vonona ny hampitsahatra ny fanondranana entana.”
Ny orinasa indiana Serum dia nanambara ny fahatarana amin'ny famoahana ny vaksinin'ny AstraZeneca izay miteraka ahiahy any UK.
Ny UK dia nanantena fatra 5 tapitrisa tamin'ny faran'ny volana martsa, saingy ny fanaterana azy dia toa tara amin'ny herinandro vitsivitsy.
Hatramin'ny nandraisan'ny UK lisitra aretina sy niharam-boina betsaka kokoa noho ny firenena eropeana hafa, ny fanohizana ny programa vaksinina dia hampihena hatrany ny fampidirana hopitaly sy fahafatesan'olona.
Misy olana eo amin'ny United Kingdom satria ny orinasa Indiana, Serum, iray amin'ireo mpamorona vaksinin'ny AstraZeneca lehibe indrindra eran-tany, dia nanambara ny fahatarana. Ilay mpanamboatra indiana, izay efa namatsy fatra AstraZeneca 5 tapitrisa amin'ny fanjakana, dia nanambara fa herinandro vitsivitsy dia hampihemotra fatra 5 tapitrisa hafa antenaina amin'ny faran'ny volana martsa.
Any UK, izay efa nanindrona ny fatra voalohany tamin'ny olona manodidina ny 25 tapitrisa, mazava ho azy fa miteraka ahiahy ny vaovao. Taorian'ny dingana voalohany nanoratan'ny Fanjakana Angletera aretina sy niharam-boina betsaka kokoa noho ny firenena eropeana hafa, ny "maodely anglisy" dia nahomby tamin'ny fampihenana haingana ny hopitaly sy ny fahafatesan'ny olona.
Manoloana ny olana eropeanina iray, izay sahirana ny paikadiny fanaovana vaksiny, dia vao mainka nahagaga kokoa ny valin'i Londres - tany ivelan'ny sakana 27 fotsiny. Fotoana iray manintona loatra ihany koa ity mba tsy hanararaotan'ny praiminisitra Boris Johnson izany, milaza fa ny fahombiazan'ny vaksinin'i Angletera dia fahombiazan'ny Brexit ihany koa ary fizakan-tena miankina amin'ny birao any Bruxelles.
Ny marina, na izany aza, dia nanisa fatra dosis tsy tapaka sy mahery vaika i UK ny vaksinin'ny AstraZeneca (Dos 14 tapitrisa, mitovy amin'ireo firenena eropeana rehetra), raha vitsy kosa ny andiany tsy nampoizina dia natolotra tany Eropa. Androany, ao amin'ny kaontinanta, herintaona taorian'ny nanombohan'ny areti-mifindra, ny sakana voalohany hanoherana ny viriosy dia toa ny fanidiana.
Namadika an'i India?
Hihena ny fampielezana vaksiny anglisy ary haterin'ny Serum ny fanemorana ny fitaterana azy. Amin'ny ady atao amin'ny coronavirus sy amin'ny famokarana vaksinin'ny anti-COVID, India dia mampiavaka ny tenany ho mahery fo iray miavaka. Ny fahaizany mamokatra no nahatonga azy io nanao ny anaram-bosotra hoe “fivarotam-panafody manerantany.”
Ny gazety Indiana dia nitatitra ny filan'ny governemanta New Delhi hanafaingana ny hetsika fanaovana vaksiny anatiny. "Hisy ny fahatarana, saingy tsy hisy fiatraikany amin'ny sarintany momba ny fanefitra aretina", hoy ny toky nomen'ny minisitry ny fahasalamana anglisy, Matt Hankok.
"Fa ny tena zava-dehibe dia eo amin'ny làlana marina isika ary ho afaka hanatitra ireo vaksiny ara-potoana sy ara-potoana hahatratrarana ny tanjona kendrentsika." Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny drafitra miorina amin'ny fanokafana ny firenena, nambaran'i Boris Johnson 3 herinandro lasa izay, dia mitoetra ho manan-kery. Mikasa ny hitondra ny Fanjakana Mitambatra “hiverina amin'ny laoniny” izy amin'ny 21 Jona, andro izay antenaina handresen'ny ankapobeny ny fepetra. famonoana
Ny triatra amin'ny maodely anglisy?
Ny fihemorana sasany amin'ny fampielezana vaksiny any UK anefa dia efa eo am-piandohana satria nampitandrina ireo mpitantana ny NHS: "Ny olona latsaky ny 50 taona dia mety hiandry iray volana lava noho ny nandrasana hanaovana vaksiny noho ny tsy fahampian'ny vaksiny."
Tsy takatry ny saina ny fikasan'i Downing Street hampihenana ny haben'ny fahatarana rehefa avy namoaka ny heviny ny governemanta UK ary nanolotra ny famakiana ireo tabloid sy gazety izay ny vaksinin'ny UK lakolosy fahombiazana "dia fahombiazana Brexit."
Ity dia fitantarana iray izay tsy vitan'ny hoe tsy mankasitraka ireo izay nikasa ny hisian'ny loza any London tamin'ny alin'ny "fisaraham-panambadiana" nataon'i Londres tamin'ny Union, fa manome ny paositra Brexit UK famantarana ny paikady indostrialy hotohizany, izany hoe ny fanohanana ny fahamboniana eo am-panaovana sehatra.
Ny olana dia tsy afaka manao izany izy hanimba ny hafa, dia i Eropa. Noho io antony io, amin'ny “ady vaksinina” eo anelanelan'ny moron'ny 2 amin'ny Channel, ary manoloana ny fampiatoana ny vaksinin'ny AstraZeneca avy amin'ny firenena maro ao amin'ny bloc, dia sarotra ny tsy mahita ireo tombontsoa mifanohitra.
Aorian'i Brexit, any Grande-Bretagne sy EU dia mety hiharan'ny fandrika Gore Vidal: "Tsy ampy ny fahombiazana raha te handresy. Ny hafa tsy maintsy hahomby. ”
Tsy mety ve i Eropa?
Mandritra izany fotoana izany, ny Vondron Eropeana dia miomana amin'ny fameperana vaovao amin'ny fanondranana vaksininy any Royaume-Uni. Tamin'ny andron'ny hazavana maintso avy amin'ny maso ivoho eropeana (EMA) ho an'ny vaksinin'ny AstraZeneca, didim-pitsarana tsara, na dia misy fepetra aza ny fampitandremana ho an'ny olona tandindomin-doza, hoy ny filohan'ny komisiona Ursula von der Leyen fa vonona ny "hampiasa fitaovana rehetra" izy "Fifamalianana sy fitoviana" amin'ny fanondranana ireo voaroaka.
Ny referansa, na dia tsy miresaka mivantana azy aza i von der Leyen, dia mazava tsara any Londres, ary hatreto dia misy dosie 10 tapitrisa naondrana avy amin'ireo zavamaniry ao amin'ny Union mankany United Kingdom, firenena voalohany amin'ny resaka fanondranana vaksinina ary ny faritany misy ny orinasa 2 an'ny AstraZeneca, izay vita amin'ny fifanarahana dia tokony hamokatra 27.
Amin'ny lafiny mifanohitra amin'izany, hatrany amin'ny Fanjakana Mitambatra ka hatrany Eropa, ny isan'ny fatra dia "aotra". Nanazava ny filoham-pirenena fa "eo an-databatra ny safidy rehetra, fa raha tsy miova ny toe-javatra" haingana, dia hodinihin'i Bruxelles raha hampifanaraka ny fahazoan-dàlana fanondranana amin'ny haavon'ny fisokafan'ny firenena hafa.
Midika izany fa mety misy sakana avo kokoa noho io napetrak'i Italia io tamin'ny volana febroary lasa teo izay nanakana ny vaksinina 250,000 ho any Aostralia.
Raha ny marina ny sendika dia afaka mitaky ny Andininy 122 amin'ny Treaties eropeana, fehintsoratra iray izay manome fepetra ny fandraisana fepetra maika raha sendra "fahasahiranana lehibe" amin'ny famoahana vokatra sasany.
Avy hatrany ny valiny avy any Downing Street izay, toy ny taloha, dia mandà ny fiampangana ny fameperana ny fanondranana. Ny Fanjakana Mitambatra dia "manaja ny fanoloran-tenany," hoy hatrany ny mpitondra tenin'ny governemanta London, "antenainay fa hanao izany ny EU." Saingy mandritra izany fotoana izany, ny tanjona ho an'i Eoropa dia mijanona ho fanefana 70% ny olom-pirenena amin'ny fahavaratra - olona mihoatra ny 200 tapitrisa izany.
Loharano: ISPI (Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale - Ivotoerana ho an'ny fianarana politika iraisam-pirenena)
Fipoahana volkano tampoka taorian'ny horohoron-tany
Thailand dia manafoana ny quarantine COVID-19 ho an'ny mpitsidika